ရှန်ကျန်း JYMed နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ပိုကောင်း peptide သာ. ကောင်း၏ဘဝ
ရှန်ကျန်း JYMed နည်းပညာ Co. , Ltd မှအပါအဝင်ထုတ်ကုန်အခြေစိုက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် peptides ၏စီးပွားရေးအတွက်စေ့စပ် high-tech လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တက်ကြွစွာဆေးဝါးပစ္စည်း peptides, အလှကုန် peptides နှင့်ထုံးစံ peptides အဖြစ်အသစ်သော peptide မူးယစ်ဆေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ရှန်ကျန်း JYBio ဆေးဝါး Co. , Ltd နှင့်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သောဟူဘေး JY ဆေးဝါး Co. , Ltd မှ: JYMed နှစ်ခုလုံးလုံးပိုင်ခွဲများရှိပါတယ်။
【 R & D စင်တာ】
ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ် JYMed ရဲ့ R & D စင်တာ, အသစ်သောမူးယစ်ဆေးတ္ထုများ, peptide API များနှင့်သက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကို set up ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာကိုခေတ်မီ peptide စုပေါင်း, ကြီးမားတဲ့-စွမ်းရည်ပြင်ဆင်မှုသန့်စင်စနစ်, နဲ့ MS, HPLC, GC, ခရမ်းလွန်, IC စတာတွေအပါအဝင်ပြည့်စုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတူရိယာတပ်ဆင်ထားသည်အဆိုပါ R & D စင်တာကိုလည်းအသစ်သောမူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလွှဲပြောင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
JYMed FDA က cGMP လိုက်နာမှုနှင့်အညီနန်ကျင်းလေး peptide API ကိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိပါတယ်, နှစ်ယောက်ချောထိုးဇီဝထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ cGMP လမ်းညွှန်ချက်များအောက်တွင်စွမ်းရည် Injection နဲ့အေးခဲ-အခြောက်လှန်းအမှုန့်ထုတ်ကုန်သေးငယ်တဲ့ peptide Injection ၏စီးပွားဖြစ်သုတ်ပေးနိုငျသောရှန်ကျန်း၌ရှိကြ၏။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံး peptide API ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်သည့်, Xian, ဟူဘေးပြည်နယ်တွင်တရုတ် peptide API အတွက်တဆယ်ခြောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနေကြသည်။
JYMed, ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ peptide စက်မှုစနစ်အားရှိပါတယ် CRO / CMO / CDMO / OEM နှင့်စည်းမျဉ်းရေးရာထောက်ခံမှုအပါအဝင်ဘက်စုံ peptide ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ peptides အဘို့အသင့်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောလွတ်လပ်သောနှင့်ဓာတ်ပြုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်!
JYMed ၏ Key ကိုကိန်းဂဏန်းများ
● 315 န်ထမ်းတစ်နိုင်ငံလုံး
●2RD ဓါတ်ခွဲခန်း (Pingshan, Nanshan)
●3ကုန်ထုတ်စက်ရုံများ
● APIs အား, နန်ကျင်း Lishui, Jiangsu, FDA ကအတူလိုက်နာမှု4ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
● APIs အား, Xian'ning, Hubei, (ဆောက်လုပ်ဆဲ) FDA ကအတူလိုက်နာမှု 16 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
●ပြီးဆုံးထုတ်ကုန်ရှန်ကျန်း Pingshan, Guangdong2သောက်သုံးသောလိုင်းများ
●7ထုတ်ကုန်ပုံစံတင်ပို့ရန်အောက်မှာ5ထုတ်ကုန် CFDA မှ ANDA တင်သွင်း
● 1 ထုတ်ကုန် CFDA မှ IND တင်သွင်း
● 1 ထုတ်ကုန် VMF (အမေရိကန်-FDA က) တင်သွင်းခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်အလက်မှတ်ရရှိခဲ့